रेल चलाउन भारतको अनौठो प्रस्ताव : चालकदेखि सुरक्षा गार्डसमेत भारतीय नै राख्नुपर्ने!
19th November 2019, 06:13 pm | ३ मंसिर २०७६
काठमाडौं : निर्माणाधीन जयनगर जनकपुर रेलमार्ग संचालनका लागि भारतले विशेष शर्तसहितको प्रस्ताव अघि सारेको छ। यो शर्तमा रेल संचालनका लागि चालकदेखि सुरक्षामा खटिने पालेसम्म भारतीयलाई राख्नुपर्ने उल्लेख छ। दुई वर्षसम्म चालकदेखि सुरक्षाकर्मीसम्म राख्नुपर्ने र त्यसवापत नेपालले रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ।
रेल्वे कम्पनी पुन: ब्युँताएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ। रेल विभागका अनुसार प्राविधिक देखि पालेसम्म गरि करिव २ सय जना कर्मचारी आवश्यक छ। भारतीय कम्पनीले आफ्ना कर्मचारी राख्न प्रस्ताव गरेपनि सबै कर्मचारी भारतबाट नल्याइने मिश्रले जानकारी दिए।
‘पालेको तलब नै नेपालको सहसचिवको जतिकै छ। भारतीय प्रस्ताव हामीसम्म आइपुग्दा हामीनै आश्चर्यमा पर्‍यौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'रेल चलाउन हामीसँग प्राविधिक कर्मचारी नभएकाले वाध्यतावस राख्नुपर्ने अवस्था छ। तर, पालेसम्म राख्ने विषय हामीलाई मान्य छैन।’ नेपालले सुरुमा भाडामा रेल संचालन गर्ने योजना बनाएको थियो।
किन ढिला भयो?
'नेपालले किन्न खोजेको रेलसँग श्रीलंकाका लागि बनेको रेलले मेल खाएन। हाम्रो चाहाना अनुसारको रेल बन्दैछ। अहिले पार्टपुर्जा जोड्ने र रङरोगनको काम भइरहेको छ,' उनले भने।
रेल तयार हुन लागेको भएपनि रेल्वे लाइन नै हस्तान्तरण भएको छैन्। वर्षाले क्षति भएको रेल्वे लाइनको मर्मत समेत सुरु गरिएको छैन। रेलमार्ग हस्तान्तरण नभएकाले भारतीय पक्षले नै मर्मत गरिदिनुपर्छ। विभिन्न खण्डमा गरी करिव १० करोडको क्षति पुगेको छ। मर्मतका लागि दुई महिना समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। छठ लगत्तै मर्मत सुरु गर्ने भनिएको भए पनि अझै सुरु हुन सकेको छैन।